Jonathan Spier's Zvinyorwa pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Jonathan Spier
Jonathan Spier ndiye CEO we Zvak. Ane makore anopfuura makumi maviri eruzivo rwekuvaka makambani anotungamira-anotungamira, anosanganisira maviri epamberi akabudirira mabasa senge venture-backed CEO kuNetBase nePLAE. Spier ane dhigirii reBachelor muComputer Science nerukudzo kubva kuUC Berkeley uye MBA ine rukudzo kubva kuHarvard Business School. Anobva kuSan Diegan, Spier anofara kuve chikamu chenharaunda yetekinoroji mutaundi rekumusha kwake.
China, Kukadzi 17, 2022 China, Kukadzi 17, 2022 Jonathan Spier
Tarisa uone dambudziko reiyo sales development rep (SDR). Vadiki mubasa ravo uye kazhinji vapfupi paruzivo, iyo SDR inovavarira kuenderera mberi mukutengesa org. Basa ravo rimwe chete: kutsvaga tarisiro yekuzadza pombi. Saka vanovhima nekuvhima, asi havagone nguva dzose kuwana nzvimbo dzekuvhima dzakanakisa. Ivo vanogadzira rondedzero yetarisiro yavanofunga kuti yakakura uye vanoitumira mugero rekutengesa. Asi zvakawanda zvetariro yavo hazvikodzeri